Sekuyisikhathi eside namahemuhemu ngalolo amayelana ukwethula imithetho emisha ukuze ngiqeqeshelwe isikole ukushayela. Izinkulumo ezinjalo uyakukhathalela kakhulu abantu abafuna ukuya kulesi sikole selayisense nohahelwa yokushayela. Awu, enginakho ulwazi ngqo yaziwa, futhi aqambe ke ukunikeza izimpendulo ukuvula ended imibuzo kudala.
Izigaba kanye nezigatshana
Ngakho, entsha iziqondiso ukuqeqeshwa ngendlela into yokuqala esikoleni ukushayela kulo kubonisa ezinye izinguquko nomthetho ofanele. Ngokwesibonelo, ngonyaka odlule awazange langena izigaba zangaphambili ezikhona kanye subcategories. Nokho, umkhuba, kwentelwa kutsi letichibiyelo ungathathi skhathi. Ngoba ngaleso sikhathi kodwa kunoma yisiphi isikole ukushayela alisilungele yalungiswa lwezifundo. Kwadingeka ukushintsha ngemuva kokwenza izinguquko.
Ngakho, kukhona "M" isigaba. Man, wean le phrofayela uthola ilungelo we umshayeli Moped futhi isithuthuthu. Kwakuvamise ukuba: abantu eyayinawo lezi zimoto kwakungadingeki ukuba babe lolu hlobo of ungubani. Nokho, ngenxa yokuthi ngokuvamile kungaphansi ingozi lapho abahlanganyeli abashayeli of mopeds noma Scooters, kwanqunywa ukuba wenze izinguquko ezithile. Yingakho imithetho emisha ye ukuqeqeshwa ezikoleni ukushayela kwakusho ukuthi umuntu ukukhwela enye yalezi zimoto edingekayo ukuze baye badlula kokuxilongwa ezifanele.
Manje ngisho ngaphambi kokungena kubalulekile ukucacisa ukuthi le layisensi isikhungo sakho semfundo. Kunconywa ukuthi iziqondiso abasha ukuqeqeshwa ababekudinga isikole ukushayela.
Okuningi zonke semfundo kulendawo iyadingeka ukuthuthukisa uhlelo ayo, bese uvumele ke ngenxa yezizathu ngokomthetho lapha eNingizimu omgwaqo. Lokhu yebandla lomphakathi unesibopho ukubheka base impahla lesikole, kanye noma ngabe uhlangabezana nazo zonke izimfuneko kushiwo.
Esimweni lapho ubeka ayikho ilayisensi noma uhlelo samukelwe, umfundi umane akakwazi evumela kudlule imfundiso yokuziphendukela nokushayela sezimoto. Futhi ngenxa yezizathu ezisemthethweni.
On the ezintsha main
Manje into esemqoka. imithetho okusha nokuyala isikole ukushayela manje ukuvumela traffic kudlule ku Ukuhlolwa ayikho "Mechanics", kanye "umshini". Kulabo abangamazi: okungukuthi, hhayi ukudluliselwa manual kanye othomathikhi. Kulula kabi, ngoba imoto enjalo, ngaphandle ukuthi ujike amasondo ayo, angidingi lutho.
Kodwa lapha kubalulekile acabangele ambalwa umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ukuthi idinga imithetho emisha ukuze ngiqeqeshelwe isikole ukushayela. Umuntu (ngokuvamile intombazane) ubophekile ukuba abhale isitatimende afuna ukuba baqeqeshwe emshinini, nesebenzela ngaphansi kolawulo othomathikhi. Kodwa-ke kukhona ngisho iphuzu elilodwa. Iqiniso liwukuthi kuleli cala uyokuma uphawu kwamalungelo wobuntu ukuthi unelungelo ukuphatha umshini eyodwa kuphela, okuyinto kusethelwe ku- "okuzenzakalelayo." Futhi kuwukuhlakanipha ukuphetha, ngoba "Mechanics" kudivayisi ehlukile ngokuphelele, futhi ngaleyo ndlela kube nzima nakakhulu ukuba ube nemoto.
imithetho emisha ye ukuqeqeshwa ezikoleni ukushayela futhi bathi kusukela manje umuntu test kuzodingeka athathe lesi sivivinyo njengendlela "ekuvaleni iyaguquguquka." Ngaphambili kwathatha izimoto kuphela "Mechanics", kodwa manje kusebenza "umshini" kanye. Izinsalela bendabuko emithathu ingxenye ukuhlolwa - theory kanye wesifunda edolobheni.
Futhi, imithetho emisha izikole ukushayela aqukethe ulwazi oluthile ukuthi kungaba wusizo ukufunda labantu abathola "B" isigaba ilayisensi (ATVs). Ngaphezu umzimba bendabuko manje kufanele futhi athobele disembarkation ephephile abagibeli. Okuningi ngokunembile, ukumlingisa.
imithetho okusha izikole ukushayela futhi aqukethe ulwazi oluphathelene abahloli. Lezi zimfuneko obuqinile kakhulu. Manje abe umhloli kuphela ngomunye umuntu attained ubudala 25 futhi qiniseka ukuthi imfundo ephakeme. Ngaphezu kwakho konke okungenhla, kufanele futhi ube nenani evumelekile zokushayela kanye ubuncane ukushayela isipiliyoni - iminyaka emihlanu. Eza force imithetho emisha ukuze ngiqeqeshelwe ukushayela izikole kanye Russian-2015. Ngaphambili, umhloli kungaba uhlobo umuntu isipiliyoni "ukushayela isihlalo" waba iminyaka emithathu.
Futhi ushintshe isimo idokhumenti, okuyinto ubufakazi bokuthi umfundi isidlulile Yiqiniso. Lapho umfundi uqeda ukuqeqeshwa, akufanele ukunikeza ubufakazi, njengoba kwakunjalo eminyakeni eyedlule. Henceforth wanikwa idiploma, okuyinto okukhethekile ezinjalo, njengoba "Umshayeli wale moto." By the way, izikhungo zangaphandle ezindaweni ezifana akuvunyelwe. Umuntu ababhalisela izifundo ubophekile ukuba uqaphele - Kumelwe ulalele wonke emakilasini ungaphuthelwa olulodwa sokuprakthiza.
Izinguquko kuhlelo lwe-
imithetho emisha ye ukuqeqeshwa ezikoleni ukushayela ukuthatha nomphumela kusukela 2015 zamanje, futhi kusukela ngaleso sikhathi esifanayo futhi ushintshe uhlelo. Manje ubuncane theory, okuyinto abafundi ngizodabula, kuyinto 84 amahora ukuqeqeshwa. Lelo nani manje luzobandakanya lokhu esiteji? Okokuqala, izisekelo umthetho ophathelene nokuphepha emgwaqeni. Okwesibili, imithetho yomgwaqo. Okwesithathu, eziyisisekelo ngokwengqondo nangokomzimba ushayela. Ingxenye yesine - le-medical aid ukuthi izisulu. Uphiko yesihlanu kwemfundiso yokuziphendukela - imithetho mayelana ukulawula imoto yakho iphephile. Eyesithupha, ekugcineni, imithetho yokusebenza umshini.
It sewafika ukusebenza imithetho emisha ye ukuqeqeshwa ezikoleni ushayela. Nokho, kuze kube manje Awenzanga izichibiyelo. Ngokwesibonelo, manje, ngesikhathi imfundiso yokuziphendukela Kusengenzeka ukugwema amaphutha ezimbili. Khona-ke, esikhathini esizayo, sihlelwe ukusungula mfuneko entsha. It sifundeka kanje: ukuhlolwa theory kuzobalwa kuphela uma umfundi akenzanga iphutha elilodwa. Lokho lengiyo kumele kube 20 aphume 20. Nokho, kuze kube manje kungcono kuphela umbono.
Manje, bangaki izinyanga kubalulekile ukufunda kusuka kwesokudla in 2015. Impendulo kuyadida, kodwa amahora ungakwazi basho lokhu okulandelayo: imfundiso yokuziphendukela - amahora angu-130; Olungokoqobo - 56; kubhala luhlolo - 4 amahora. Ngokuvamile, abantu abafuna ukuthola B1 isigaba ilayisensi, kumelwe bahlukane nakho amahora 190. Isikhathi eside kunazo zonke kwakudingeka alandele inqubo abashayeli ikusasa emkhakheni D (mayelana 257 amahora).
Kuthiwani ngesikhathi - lapha ngezindlela ezahlukene. Kukhona ukushayela izikole ukuthi kwandise isikhathi ukuqeqeshwa of izinyanga eziyisithupha (okuyinto kukuthukuthelise eziningi, njengoba, ngokwesibonelo, neminyaka engu-70 abantu bafunda esiphezulu amasonto ayisithupha). Kwakukhona kulezo zikole lapho ungakwazi bahlukane nakho izinyanga 2 kuphela futhi ulaliswe ukuhlolwa. elithi okulingene - 3-4 izinyanga. Kodwa, futhi, omunye imibono non-ngaphambi kokuba abe umuntu kule imithetho emisha ihlala wacabanga ukunweba izinyanga eziyisithupha.
Enye caveat ezibalulekile. Izindleko ngo-2015 kwaba ephakeme. Yiqiniso, kwakukhona izifunda lapho intengo ubudala (ie 25-28 ruble ayizigidi). Lezi zihlanganisa, isibonelo, eCrimea, okuyinto sekuqalile ukwenzeka manje ukuthi isikhathi okwathatha isikhathi eside kangako sezinguquko. Kodwa kakhulu, amanani rose ngo-30%. E-Moscow, isibonelo, i-evamile Isikole esifundisa ukushayela bahlukane nakho umshayeli izobiza ruble angaba yizinkulungwane 45. Kodwa intengo lincike zindlela eziningana. On lokho kwesikhathi ukuqeqeshwa, namahora, bangaki babehlele ukuqhuba workshop futhi lapho imishini abafundi ozama ukushayela. Ayikho ngenani elikhulu njengoba ubuncane (ngokulandela umthetho). Izindleko ukushayela iziqondiso esikoleni azilungiselele.
Amafutha angakanani okufanele athululelwe enjini: imiyalo, izincomo